၂၀၂၂ မှာ LEGO Pirates ဆောင်ပုဒ်ကိုငါတို့ပြန်တွေ့ရမှာလား။
17 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 543 Views စာ0မှတ်ချက် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော, 90th နှစ်ပတ်လည်, ဘိုင်အို, ရဲတိုက်, Classic အာကာသ, Creator 3-in-1, Ideas, Lego, Lego BIONICLE, Lego ရဲတိုက်, Lego Creator 3-in-1, Lego Ideas, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ, LEGO ပင်လယ်ဓားပြများ, Lego အာကာသ, ပင်လယ်ဓားပြများ, ကာရစ်ဘီယံ၏ပင်လယ်ဓားပြ, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, အာကာသ, အဆိုပါ LEGO Group
Lego Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြအငြိမ်းစားယူမယ့်ရက်ကို ၂၀၂၁ အထိရွှေ့ထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနာဂတ်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Lego ၂၀၂၂ တွင်ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်အခြားဘက်သို့လား။
မူလကနောက်နှစ်ကုန်အထိစင်ပေါ်တက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ အခုလုပ်မယ် အငြိမ်းစားယူပုံရသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကောင်းရန် Lego အဖွဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုမှအနားယူရန်ရွေးချယ်သောအခါခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက်များမပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတတ်အနည်းငယ်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြသိသာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုရှိတယ်၊ နည်းနည်းပိုရှည်တယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုရှိတယ်။ Pirates ပရိတ်သတ်တွေအတွက်စံပြရလဒ်ကနေ ၂၀၂၂ မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ swashbuckling ဇာတ်လမ်းတိုင်းရဲ့အပြည့်အစုံကိုဒီမှာပါ။
အိပ်မက်: Pirates အခင်းအကျင်းအသစ်
ဘို့ Lego အချို့သောစပျစ်သီးကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများ၊ retro themes သုံးခု (တစ်ပြိုင်နက်) နှင့်အတူပြန်လာသည် Classic ရဲတိုက်နှင့် Classic အာကာသ) သည်အိပ်မက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ Lego Group သည် Pirates အစုံအသစ်စက်စက်လှိုင်းလုံးအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်၊ ၎င်းတွင်ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောတစ်စင်းပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုအကြောင်းပြချက်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အငြိမ်းစားယူနိုင်သည်။ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ -သင်္ဘောပျက်တစ်ခုမှအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နိုင်သော Black Seas Barracuda သို့၎င်း၏ပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်စေရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုရှောင်ရှားရန်။
ဤသီအိုရီကိုဆန့်ကျင်သောစုံတွဲများစွာရှိသည်၊ သို့သော်ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မယှဉ်နိုင်ဟုယူဆရသည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လီဈေးနဲ့ 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိစင်ပေါ်တွင်အတူရှိနေရန်လိုအပ်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်မရ။ လောလောဆယ်တော့အဲဒီ့နှစ်စုံကတူတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Lego အဖွဲ့၏ဖြေရှင်းချက် ၎င်း၏ retro themes များကိုကိုယ်စားပြုသည်.
ပိုဖြစ်နိုင်ချေ-နှစ် ၉၀ ပြည့် Pirates set
နောက်နှစ်မှာတွေ့မယ် Lego Group သည်၎င်း၏ ၉၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထုတ်လုပ်သည် ပရိတ်သတ်များကမဲပေးခဲ့ကြသည် တစ်ဦးအတွက် Lego Ideas မဲရုံ ထိုမဲအရေအတွက်၏နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည် Castle တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါတို့သိသည်။ Classic အာကာသ၊ BIONICLE သို့မဟုတ်ပင်လယ်ဓားပြများ။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည် Lego အငြိမ်းစားယူခြင်းအားဖြင့်အုပ်စုသည်၎င်းနေရာကိုဖန်တီးလိမ့်မည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ.
ပေးထားချက်အရ BIONICLE ဖြစ်ခဲ့ပုံရသည် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် pole position ကိုယူရန် သို့သော်တစ်ချိန်တွင် Pirates များသည် ၉၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ခံရမည်ဟုအာမခံချက်မရှိချေ။ ရှိပြီးသားအတိုင်းပဲ Lego Ideas အထူးသဖြင့် ၁၉၈၉ မှမူရင်း ၆၂၈၅ Black Seas Barracuda သို့၎င်း၏ခေါင်းညိတ်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှမူရင်း ၆၂၈၅ Black Seas Barracuda ကိုခေါင်းညိတ်ခြင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသည်။ Lego အုပ်စုကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။
Curveball: Caribbean of Pirates ၏ပြန်လာမှု
Pirates of the Caribbean သည်လိုင်စင်တစ်ခုဖြစ်သည် Lego Group သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပထမအကြိမ် On Stranger Tides ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ Salazar's Revenge/Dead Men Tell No Tales အတွက် ၂၀၁၇ တွင်ပထမအကြိမ်လက်ခံခဲ့သည်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်နှစ်ကား-saga ၌ဆဋ္ဌမအပိုင်းနှင့် Margot Robbie တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော spin-off သည်၎င်းကိုပြန်ကြည့်သည်ကိုအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါကြောင့် ၂၀၂၂ မှာအဲဒီ့ရုပ်ရှင်တွေကလောလောဆယ်အတည်ပြုထားတဲ့ပြတင်းပေါက်တောင်မရှိသေးတာကြောင့်နည်းနည်းရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ လ (ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ) ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားတာ၊ လာမယ့်နှစ်မှာတစ်ခုခုကိုတွေ့ဖို့ခက်ပါတယ်။
သို့တည်းမဟုတ်၊ Pirates သည်လုံး ၀ ပျက်လိမ့်မည်
သင်အလိုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကို doom-mongers ဟုခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ဆင်တူပုံစံဆင်တူအစုံမရှိတာကိုအစားထိုးဖို့လမ်းစဖြစ်နိုင်ခြေကိုထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်။ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego Ideas ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၈ လထက် ကျော်လွန်၍ စင်ပေါ်တွင်ထားခြင်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကိုရိုးရှင်းစွာကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။
အဲဒီ့အပိုင်း ၂၊၅၄၅ ကိုမူလကလာမယ့်နှစ်လောက်အထိဆက်ဆွဲထားဖို့စိတ်ကူးတယ်၊ အထက်ပါသီအိုရီတွေတစ်ခုမှမပြဘူးဆိုရင်အဲဒါကအတော်လေးစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ငါတို့ကိုထားခဲ့တယ်။ Lego အုပ်စုလိုက်မျှော်မှန်းချက်နှင့်ပြန်လာမှု၏လိုအပ်ချက် Lego ထို့ကြောင့်ပင်လယ်ဓားပြများသည်လူအများယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
လက်ချောင်းများသည်ဤစိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်မှာလက်တွေ့မဟုတ်ပေ Lego အဖွဲ့လိုက်လုပ်တာကတကယ်တော့ start ၂၀၂၂ တွင်ပင်လယ်ခုနစ်စင်းကိုရွက်လွှင့်ပါ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ ရှေ့သို့…
← ခြောက်လ LEGO အနားယူ Star Wars အတွဲတွေငါတို့ထပ်မတွေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
LEGO မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပါ →